uDkt Langa Khumalo, uMqondisi eHhovisi LeNyuvesi LezokuHlelwa NokuThuthukiswa KoLimi nabebebambe iqhaza ohlelweni i-Bua Le Nna.
Uhlelo lwe-Bua Le Nna, olwaqalwa njengengxenye yombono weBhodi YeziLimi YeNyuvesi wokugqugquzela nokuthuthukisa izilimi zendabuko zaseNingizimu Afrika e-UKZN, lwethulwe ngokusemthethweni ezindaweni ezimbili zabafundi enyuvesi.
Iningi labafundi abebehambele lo mcimbi bahlala nakwezinye izindawo ezihlala abafundi enyuvesi yize uhlelo lugxile ezindaweni zokuhlala abafundi ezimbili kuphela.
IDini yeSikole SezobuCiko uSolwazi Donald McCracken; uSolwazi Nogwaja Zulu ongumfundisi omkhulu eSikoleni seziLimi zase-Afrika, uSolwazi Sihawu Ngubane onguMholi Weqoqo eSikoleni seziLimi zase-Afrika kanye; uDkt Langa Khumalo onguMqondisi eHhovisi LeNyuvesi LezokuHlelwa NokuThuthukiswa KoLimi noMnumzane Kgotlaetsela Marumola waseHhovisi LezokuPhathwa Kwabafundi bashiyelane inkundla behalalisela inyuvesi ngalo msebenzi oqalayo ngqa lapha enyuvesi.
UKhumalo uthe: ‘Enye yezinto ezihloswe yinqubomgomo YoLimi e-UKZN (ebukezwe ngowezi-2014) ukuthi “[…] kulondolozwe futhi kugqugquzelwe ukuhlonishwa nokukhulunywa kwezilimi ezibalulwe kuMthethosisekelo, nezinye izilimi okuhlanganisa nezilimi ezisiza ukuqinisa amaxhama emikhakheni yezamasiko, ezessayensi nezomntotho […]”.
‘Ubuliminingi buyisisekelo senqubomgomo yolimi e-UKZN. Lokhu kubalulekile kakhulu eNyuvesi ngoba umthelela wobuliminingi ukusingatha nokugqugquzela ubumbano kwezenhlalo emphakathi ni waseNyuvesi,’ usho kanje.
‘Kungenxa yalesi sizathu ukuthi ngonyaka wezi-2014 i-ULPDO yaqala olunye lwezinhlelo zayo i-Bua Le Nna (Let’s Talk).
‘Lolu hlelo lwenziwa ngokubambisana neHhovisi LoMqondisi Omkhulu Kwezabafundi ngokusebenzisa abangabafundi abahlala ezindaweni zabafundi kanye nabasebenzi base-ULPDO. Lolu hlelo luhlose ukufundisa abafundi abahlela ezindaweni zabafundi abangasikhulumi isiSuthu ulimi lwesiSuthu e-UKZN. Uhlelo lusaqale ukusebenza e-Ansel May nase-John Bews okuyizindawo ezihlala abafundi.
U-McCracken uthe: ‘Ngithokoze kakhulu ukuzwa ngalolu hlelo ngoba lufike ngesikhathi izilimi zomdabu zisengozini yokushabalala. Kubalulelkile ukuthi sigcine izilimi zase-Afrika ziphila, sizithuthukise, sizikhulume sizisingathe ngezikhathi zonke.’
UZulu ukhulume ngomlando wesiZulu nesiSuthu nokuthakaselwe kakhulu yizethameli. Ubuye wachaza nanokuthi lezi zilimi zingavikelwa kanjani ukuze zingashabalali futhi zibe yifa lezizukulwane ezizayo.
UMarumola uthe kumumangazile ukuthi kunohlelo oluhle kangaka e-UKZN. Ukhulume ngaseke wabhekana nakho ngenkathi esangumfundi lapho wayezizwa ekhishwe inyumbazane ngokolimi nangokwesiko. Uthe ubengakucabangi ukuthi kungaba khona uhlelo olufana nalolu eNyuvesi.
UMarumola uthe ihhovisi liyaseka loluhlelo ngokuphelele futhi ufisa sengathi lungasatshalaliswa ezindaweni zabafundi eNyuvesi yonke.